Quinoa Oligopeptide ntụ ntụ - Manuflọ ọrụ nrụpụta
Ihe omumu ihe omumu nke quinoa oligopeptide uzuzu bu ihe na-erughị 1000u, nke nwere ike itinye aka na aru mmadu ngwa ngwa. Ọzọkwa, quinoa obere molekụla peptides nwere ihe pụrụ iche bioactivity.
Quinoa Oligopeptide ntụ ntụ vidiyo
Quinoa Oligopeptide ntụ ntụ nkọwa
Product Name Quinoa Oligopeptide ntụ ntụ
Kedu ihe bụ Quinoa Oligopeptide ntụ ntụ?
Quinoa oligopeptide ntụ ntụ na-akwadebe site defatting, ndinuak, enzymatic hydrolysis, ihicha, nkwakọ ngwaahịa na na.
Kedu uru nke Quinoa Oligopeptide ntụ ntụ?
Quinoa antioxidant peptides nwere ezigbo ngbachapụ ike iji superoxide anion radicals na hydroxyI radicals ma gosipụta ezigbo mmekọrịta-mmetụta mmekọrịta.
Lunasin dị na quinoa bụ ụdị polypeptide, nke nwere ọtụtụ ihe ndị dị ndụ ma nwee ike melite ọgụ, antihyper -tension na anticancer.
Na-edozi ahụ ma na-edozi nke ọma
Quinoa protein nwere albumin na globulin (44% - 77%). Ọdịnaya nke gliadin na glutelin pere mpe, ya mere o nwere ezigbo soluble na ọ dị mfe itinye ahụ mmadụ. Ma n'ihi mmetụta nke agbụ disulfide, quinoa protein nwere ezigbo nkwụsi ike, ọ na-ejigide njirimara mbụ na nri na-edozi ahụ mgbe emechara ya.
Usoro nzaghachi azịza iji bulie Enzymatic Hydrolysis nke Buckwheat Protein iji Kwadebe Antioxidant Peptides Process.
Ọganihu na Ọmụmụ nke Ndị Na-arụsi Ọrụ Ike nke Quinoa.
Ọganihu Nchọpụta na Omume, Njirimara na Mwepụ nke Quinoa Protein.